Somaliland: Warancadde Oo Shaaciyey Inuu Leeyahay Han Madaxweyne, Sababaha Xilka Qaadistiisa iyo Xil Miisaanle oo Uu Madaxweynaha Ka Diiday - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Warancadde Oo Shaaciyey Inuu Leeyahay Han Madaxweyne, Sababaha Xilka Qaadistiisa iyo...
“Waxaan Dhegta Ugu Sheegay In Aan Doonayo Nasasho Iyo Han Madaxweyne” Cali Warancadde.
Wasiirkii Hore ee Wasaaradda Daakhiliga Somaliland Md. Cali Maxamed Warancadde ayaa ka hadlay ujeedada dhabta ah ee Madaxweyne Siilaanyo xilka Wasiirka Daakhiliga uga wareejiyey.
Warancadde waxa uu sheegay in uu ka cudur daartay xil Wasiirnimo oo Madaxweyne Siilaanyo u soo ban-dhigay markii uu xilka wasaaradda Daakhiliga ka wareejinayay isaga oo sheegay in uu ka diiday Madaxweynaha sidoo kalena dhegta ugu sheegay in uu doonayo in uu muddo yar nasto oo uu isu diyaarinayo jagada Madaxweynimo.
Wasiir Cali Maxamed Warancadde oo shalay ka hadlayay xaflad ballaadhan oo loo qabtay xil wareejinta Wasaaraddan Arrimaha Gudaha oo uu xilka wasaaraddaasi ku wareejinayay Wasiirka cusub ee dhawaan Madaxweyne Siilaanyo mansabkaasi u magacaabay Md. Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir (Faratoon) isaga oo Cali Warancadde faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey sababaha keenay in xilka wasaaraddaasi laga wareejiyo iyo sidoo kale isaga oo shaaca ka qaaday in uu ku jiro han madaxweyne sidaa darteed maadaama muddo badan oo uu xilal wasiirnimo soo qabtay la gaadhay wakhtigii uu u nasab lahaa ka midho dhalinta hankiisa siyaasadeed.
Cali Maxamed Warancadde oo arrimahaa ka hadlayaa waxa uu yidhi: “Waxaad ogtihiin in saami qaybsiga beelaha darafyadu ay muddo badan saluug ka qabeen si uu haddaba madaxweynuhu cuqdadaasi u saaro ayaa keentay in mansabkan la iga wareejiyo. Waxaan doonayaa in aan hadal hayn badan oo suuqa ah ka jawaabo.
Haddii uu madaxweynuhu ii yeedhay oo uu iga talo galiyey sidii aan cadaada qof xilka laga qaadayo ahayn oo uu I waydiiyey oo uu ii sheegay sababta uu uga gol leeyahay xilka qaadistayda wasaaraddan oo aan la qaatay. Haddii uu ii magacaabay wasaarad kale oo aan waxba ka yarayn oo aan ka cudur daartay.
Haddii aan dalbaday oo aan anuu madaxweynaha ka codsaday maadaama aan qarankan dhawr iyo labaatan sano u shaqaynayay ooh agar la’aan ah in aan yar nasto dhegtana aan u saaray Madaxweyne wixii hadda ka dambeeya waxaan doonayaa in aan yar nasto oo aan isu diyaariyo Madaxweyne, saaxiibkay Muusena wuu I maqlayaayoo waan uga hadhay doorkane oo uu iga aqbalay.
Haddaan anigu dalbaday safiirnimadaasi oo aan idhi madaxweyne meel aan ku nasto oo dalkana wax uga qabto miyaan qaldanaa. Haddii ay tallaabadaasi sidaa u dhacday oo anigu aan dalbaday safiirka miyaan qaldanaa?” Ayuu yidhi Wasiirkii hore ee Daakhiligu isaga dadkii xafladda joogay in badan oo ka mid ahi HAA ku jawaabeen in kale oo badanina MAYA. Wasiir Warancade ayaa noqon doona safiirka Somaliland ee Itoobiya.
Somaliland: “Waanu dhiiri galinaynaa koritaanka afka hooyo” Wasiirka Madaxtooyada Somaliland